Tanjona ankapobeny motera herinaratra amidy amin'ny vidin'ny fihenam-bidy
Ny tanjon'ny foibe motera tsara indrindra
Karazan-tsafidy herinaratra isan-karazany
Misafidiana amin'ny safidintsika amin'ny motera herinaratra. Makà milina Electric Electric kely amin'ny Internet na mitady vokatra ara-tsiansa sy fampianarana hafa avy aminay.
Vokatra moto elektrika
Motera elektrika DC tsy misy borosy fantatra amin'ny anarana hoe motera elektrika (ECM na EC motera) ary motera DC miaraka. Maotera Solenoid dia motera izay miasa amin'ny fivezivezen'ny solenoid. Maotera fampidirana 3 dingana dia tsotra & matanjaka amin'ny fanamboarana miaraka amina singa azo itokisana.
Hiresaka momba ny karazana maotera elektrika isika. Ny vibrationmotor dia ampiasaina hanamboarana tory fihodinana amin'ny milina. Ny motera fampidirana rehetra dia motera tsy mifanaraka. Ny fanaraha-maso hafainganam-pandeha elektronika na ESC dia faritra elektronika izay mifehy sy mifehy ny hafainganan'ny motera elektrika. Motera mihetsiketsika amin'ny famokarana sy fivarotana
Manana ekipa fikarohana sy fampandrosoana marobe isika, samy manana ny heriny manokana. Iray amin'ireo orinasa vitsy any Chine isika miaraka amin'ny fahaizana mahaleo tena fikarohana sy fampandrosoana. Manararaotra ny kalitao izahay. Mividianana motera herinaratra amin'ny vidin'ny fihenam-bidy miaraka amin'ny katalana miady amin'ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra. Ny vidin'ny mpamily Microstep stepper.
Sora-baoa moto mirindra
Manana traikefa an-taonany maro izahay amin'ny famokarana motera dia ny manome anao maotera avo lenta sy maharitra. Ny orinasanay dia nivoatra tamin'ny famokarana voalohany ny motera herinaratra ka hatramin'izao, ny fizarazaran-tsolika fampidirana ac mandeha ho azy manomboka amin'ny alàlan'ny fanombohana poleta. dingana tokana & motera fampidirana 3 dingana fampidirana moto squirrel cage.
Karazana motera Herinaratra amidy
Raisinay ho kalitao ny kalitao ary ny vidiny ambany indrindra dia ny fahatsoram-po. Raha manana fanontaniana ianao dia afaka mifandray aminay, faly izahay manampy anao! Ny serivisy ho an'ny mpanjifantsika dia misy 24 ora an-tserasera. Izahay no mpanamboatra motera EV voalohany. Ny portfolio-n'ny herinaratra Siemens dia misy motera avo lenta sy malefaka. Ny motera DC tsy misy borosy (BLDC) dia miha malaza eo amin'ny sehatra toa ny fiara mandeha. Ny motera AC dia be mpampiasa amin'ny indostria, indrindra noho ny fahombiazany.
Mpamatsy moto herinaratra manerantany
Raha manana ny vokatra tianao, mividy ny motera herinaratra tsara indrindra ilainao ary mankanesa aminay! Afaka manampy izahay hitari-dalana anao ho an'ny vahaolana tsara indrindra ho an'ny orinasanao.